Migadra Noho ny Finoany Ireo Vavolombelon’i Jehovah any Singapour
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Haoussa Hiligaynon Holandey Hongroà Icibemba Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Manery ny olona hanao miaramila ny fitondrana any Singapour, ary tsy manaiky hoe manan-jo tsy hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany ny olona. Izany no mahatonga ny Vavolombelona any migadra indroa, ary mahatratra telo taona sy telo volana izany rehefa atambatra.
Rehefa feno 18 taona ny tanora Vavolombelona iray, dia takin’ny lalàna ny hidirany ao amin’ny tafika. Gadraina herintaona sy telo volana any amin’ny toby miaramila izy raha tsy manaiky. Hafahana izy aorian’izay, ary tonga dia terena hanao akanjona miaramila sy hiofana ho miaramila. Raha mbola mandà izy, dia gadraina roa taona indray.
Tsy manaiky izay lazain’ny ONU i Singapour
Efa ela ny ONU no nangataka an’ireo firenena mpikambana ao aminy mba ‘hanaiky hoe mampihatra ny zony ny olona iray raha tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. Manan-jo haneho hevitra sy hanaraka ny feon’ny fieritreretany ary hanana ny fivavahany mantsy izy, araka ny Fanambarana Iraisam-pirenena Momba ny Zon’olombelona.’ Tsy manaiky an’izany i Singapour, na dia efa nanomboka tamin’ny 1965 aza izy no mpikambana tao amin’ny ONU. Nanoratra ho an’ny Vaomieran’ny Firenena Mikambana Miaro ny Zon’olombelona ny manam-pahefana iray any Singapour, tamin’ny 24 Aprily 2002. Hoy izy: “Raha manohintohina [ny fiarovam-pirenena] ny fivavahan’ny olona iray na ny zavatra ataony, dia manan-jo hitandro ny filaminam-pirenena ny fanjakana ary tsy misy mahazo manohitra an’izany.” Nilaza mazava koa izy hoe: “Tsy ekenay hoe mihatra amin’ny firenena rehetra ny zo tsy hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretana.”
Sokafy ity rohy eto ambany ity raha tianao ho hita ny lisitr’ireo Vavolombelon’i Jehovah migadra any Singapour:
Gadraina Noho ny Finoany: Singapour (PDF amin’ny teny anglisy)
Vavolombelon’i Jehovah 19 no migadra satria tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany, anisan’izany ny anankiray izay tsy mety hatao miaramila fiandry.
Lehilahy Vavolombelona 15 no migadra satria tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany, anisan’izany ny Vavolombelona iray tsy nety nanao miaramila fiandry.
30 Jolay 2014
Vavolombelona 16 no migadra any amin’ny fonjan’ny miaramila any Singapour. Tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany mantsy izy ireo.
Vavolombelona 18 no migadra satria tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany.
24 Aprily 2002
Nanamafy ny manam-pahefana any Singapour fa tsy eken’izy ireo ny zo tsy hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretana.
Mihabetsaka ny Vavolombelon’i Jehovah ampijalina sy samborina any Singapour.
8 Aogositra 1994
Nolavin’ny Fitsarana Avo any Singapour ny fangatahan’ny Vavolombelona hampakatra fitsarana.
12 Janoary 1972
Nesorin’ny fanjakana any Singapour tao amin’ny lisitry ny fivavahana ara-dalàna ny Vavolombelon’i Jehovah.
Gadraina Noho ny Finoany: Singapour